Al Shabaab oo Muqdisho ku dilay taliyihii Nabad Sugidda degmada Qoryooleey.
Saturday January 11, 2020 - 16:46:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo maanta duhurkii ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xoogag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa xaafadda Taleex ee degmada Hodon ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa Sirdoonka dowladda Federaalka ee gobolka Sh/hoose.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay degmada ku dileen Cali Cismaan Dhaayoow oo ahaa taliyihii Nabad sugidda degmada Qoryooleey islamarkaana xiriir wada shaqeyn lalahaa ciidamada shisheeye ee gobolka kusoo duulay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay taliyaha rasaas kala heleen qeybta sare ee jirkiisa taas oo sababtay in uu isla goobta ku dhinto.
Taliyihii Nabad Sugidda Qoryooleey ee Muqdisho lagu dilay ayaa ahaa Jaasuus kooxaha Jawaasiista uqori jiray ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku leh garoonka diyaaradaha Balidoogle wuxuuna mas'uul ka ahaa duqeymo dad shacab beeraleey ah lagu waxyeelleeyay oo sanadadii lasoo dhaafay ka dhacayay Sh/Hoose.
Khamiistii lasoo dhaafay ayay aheyd markii weerar ka dhacay duleedka degmada Wanlaweyn lagu dilay 10 askari oo katirsanaa ciidamada Mareykanku tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan waxaana muuqata in Al Shabaab ay sare uqaadday weerarada ay ku beegsanayso Maleeshiyaadka Soomaalida ah ee xiriirka laleh ciidamada Mareykanka.